Iko yakasimudzirwa shure backlinks inogona kukubatsira iwe kuita kuti zvinyorwa zvako zvioneke kune vangave vatengi?
Chivakwa chekugadzira mukana wakakwana wekugadzirisa kushandiswa. Kuvaka unhu hukuru hwehutano ndicho chinhu chinokosha pakasvika pakuonekwa kwewebhu webhusaiti. Chivako chekugadzira chaiva, uye, uye chichava chekutanga yeGoogle ranking factor. Ndicho chikonzero chiitiko chedu chichave chakazvipira kune nzira dzinobatsira dzekuwana zvakasimudzirwa kumashure kumashure.
Chivakwa chekubatanidza ndechekuti iwe unogadzira hukama kune dzimwe nzvimbo dzewebhu dzinotungamirira kumashure. Pakuvakwa kwekubatana, unogonawo kuumba mazano akawandisa pane yako yepaiti inotarisa kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana. Nokugadzira zvizhinji zve backlinks zvechimiro ichi, iwe uchakwanisa kuvaka kanda. Kana hurukuro yakakura yekunze kwekunze iyo inoratidza nzvimbo yako inouya kubva kumasimba ekuremekedzwa anozivikanwa, nzvimbo yako ichasimudzirwa muhutano uye yepamusoro yakakwirira mumigumisiro yekutsvaga.
Kune nzira dzakawanda dzakasiyana-siyana dzekuwana zvibatanidzo zvakakomba. Nzira idzi dzakawanda dzinofungidzirwa uye dzinokwanisa kuwana nzvimbo yako yakarambidzwa. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuisa pfungwa dzako pamucheka wechena che SEO maitiro ekutungamirira chikwata chekuvaka.
Nzira yekugadzirisa sei zvinyorwa muGoogle?
Nguva inonyanya kukosha yaunofanira kutarisana nayo ndeyokusimudzira nzvimbo yako yepaiti uye chizivo chekuziva. Hazvisi zvakaoma sezvamungafunga. Iwe unofanirwa kuumba nyaya dzakareba dzinoputira nyaya dzakakosha kuvateereri vako. Nemuenzaniso, tsvakurudzo-yakagadzirwa nehuwandu, mu-zvakadzika zvidimbu zviduku zvinopindura mibvunzo yako yevashandi inokwana zvizere.
Uyezve, unoda kuvakira zvakakwirira, zvakakosha kumashure kwezvinhu izvi. Zvisikwa zvakagadziriswa zvakakosha zvakakosha pakugadzirwa kwemigwagwa. Zvinenge zvisingabviri kurongedza zvinhu zvisingabatanidzi zvikwangwani zvinoratidzira.
Nzira yekuwana sei zvakasimudzirwa kumashure?
Zvokudzokera shure kwako zvinoda kunyatsogadziriswa sezvinonyanya kugadzirisa zvinokuvadza nzvimbo yako.
Mapurisa anowanzokanganisa maitiro ekugadzirwa kwekubatana ari kunyanya kudhinda zvakananga zvinyorwa zvekunyorera. Iwe unofanirwa kuedza kushandisa mazwi akasiyana-siyana yeanchoti kuratidzira injini yekutsvaga mararamiro ako. Uyezve, iwe unofanirwa kudzivisa zvakananga mashizha kana mabhizimisi ekutengeserana.
Imwe rudzi rwekudzokera shure unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kune zvinyorwa zvinowanikwa. Vanouya kubva pamablogi ane chokuita necheki uye mutezo wevashanyi. Zvakakosha kushandisa kusanganiswa kwezvinhu zvakasikwa, zvinotarisirwa, uye pasi-pasi kurwisana kutsvaga mazwi nemisiyano yakareba yemisi miviri pakusikwa kwe-content link.
Kuvandudza huwandu hwehuwandu hunogona kuva nguva inopedza nguva. Zvisinei, mushure mekunge mavaka chigadziro chakakura, unogona kutanga kuumba unhu, zvakasimudzirwa zvakasimudzirwa shure zvakagadziriswa. Sezvandakambotaurwa kare, iwe unofanirwa kudzivisa kudzokorora zvinyorwa zvinyorwa sezvo kutsva bots kunogona kukukwezva se spam.
Pane matanho mazhinji aunoda kutevera kuti uite ruwaya rwemashure e-backlinks. Aya matanho anosanganisira kubvunza kumashure; vanovaka hukama hwakanaka nevacheki vanobatanidza niche uye vanoita webmasters; post kupupurirana nekunze kwenhengo; denga bhaibheri rako uye ita kuti rizivikanwe; share your contact on popular media media platforms Source .